Save Video ka iMessage in Computer Windows ama Mac ah
Sida loo badbaadi Video ka iMessage in Computer Windows ama Mac ah
> Resource > Video > Sida loo badbaadi Video ka iMessage in Computer Windows ama Mac ah
Helay funny videos ka qoyskaaga ama saaxiibadaa via iMessage, oo aad rabto inaad iyaga ku badbaadin si aad u computer? Ama waxaad aan waxba badbaadin karin videos ka iMessage si aad u computer? Ha welwelin. Taasi waa u fududahay. Macna ma laha inta badan videos aad qabto in aad iMessage iyo sida badan oo ay ku jiraan, waxaad iyaga ku badbaadin kartaa in aad PC ama Mac ka mid ah. Tilmaan-bixiyahan waxa si gaar ah ku qoran, waayo, taasu. Iska akhriso on si aad u hesho faahfaahin ah.
Laba jid oo sahlan si loo badbaadiyo video ka iMessage on iPhone
Dhab ahaantii, waxaa jira saddex siyaabood oo aad u badbaadin iMessage videos, si toos ah aad ka baareyso iPhone si aad u hesho xogta ka soo, iyo soo saarida gurmad Lugood / iCloud. No arrinta habka aad dooratid, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery)) ayaa kaa caawin kara inaad yeeshaan. Labada iyaga u oggolaadaan in aad badbaadin iMessage videos ka iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 iyo iPhone 3GS laba siyaabood. Waxaa intaa dheer, waxaad u isticmaali kartaa si loo badbaadiyo macluumaadka kale ee iPhone sida xiriirada, fariimaha, sawiro, qoraalo, sidaas aad.
Download version maxkamad barnaamijka hoose ee lacag la'aanta ah ee:
Qaybta 1aad: Si toos ah iskaan oo ka iMessage badbaadin videos on iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
Qeybta 2: Waraaqda gurmad Lugood si loo badbaadiyo video files ka iMessage on iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
Next, aynu isku dayaan in ay badbaadin video files ka iMessage la version Windows ee Wondershare Dr.Fone. Wax macno ah ma, haddii aad isticmaasho Mac ah. Tallaabooyinka aad ugu eg yihiin sida soo socota.
Tallaabada 1. Run barnaamijka iyo xiriiriyaan iPhone
Orod barnaamijka on your computer ka dib markii duuban oo ku rakibidda. Markaas xiriiriyaan iPhone in computer ka iyo in la hubiyo in lagu ogaan karaa your computer (Ha Cararina Lugood marka aad ordi Wondershare Dr.Fone), oo aad arki doonaa suuqa kala aasaasiga ah ee hoose.
Wixii iPhone 4 / 3GS, waxaa jira hab kale. Waxaad geli karaa hab sare oo riixaya badhanka buluug hoose ee suuqa kala barnaamijka. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. gala hab iskaanka in baarista iPhone
Dadka isticmaala iPhone 4 / 3GS, waxaad u baahan tahay in la raaco hab hoose si aad u soo galaan hab iskaanka qalab ee sawirka ka hor:
1. Ku qabo qalab aad, oo guji "Start" ee uu furmo suuqa.
2. Qabo Xukun iyo badhamada Home ku saabsan iPhone waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
3. Fur button Power 10 ilbiriqsi markii ay ka gudbeen, laakiin sii haysta button Home for kale 15 ilbiriqsi. Markii barnaamijka kuu sheegayaa in aad ku soo gashay hab iskaanka ah, aad u sii daayo karo. Markaas barnaamijka bilaabi doonaa baar si toos ah.
Wixii iPhone 5S / 5C / 5 / 4s users, uma baahnid inaad u baahan tahay in ay sameeyaan tallaabooyinka kor ku xusan. Si toos ah riix "Start Scan" button on furmo suuqa ugu weyn iyo barnaamijka la bilaabaa aad ka baareyso iPhone xogta ku yaal.
No arrinta oo iPhone aad isticmaasho, waxaad arki doonaa suuqa kala hoose marka scan bilaabmin.
Fiiro gaar ah: Waqtiga sawiridda, waxaad bilaabi kartaa inaad Falanqeynta helay xogta. Marka aad ogaaday in macluumaadka aad u baahan ayaa la marsiiyey soo baxay, aad yara karaa ama joojin karaa baaritaan waqti kasta.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo badbaadin iMessage video files
Scan ka dib, barnaamijka aad soo bandhigi doonaan natiijada scan ah sida soo socota, halkaas oo aad ka eegi kartaa dhammaan xogta laga helay aad iPhone, sida kitaabkii duudduubnaa camera, il sawir, xiriirada, iwm videos ka iMessages, waxaad riixi kartaa "Messages" in ku eegaan waxa ku jira. Haddii aad rabto in aad kaliya videos ka iMessages, waxaad dooran kartaa "Lifaaq Message". Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto in aad u badbaadin your computer oo guji "Ladnaansho".
Fiiro gaar ah: In sidan, waxaa barnaamijka sidoo kale ka heli MMS dhawaan tirtiray, oo ay ku jiraan ku lifaaqan ah. Haddii aad rabto in aad u kala sooci, waxaad u tagi kartaa badhanka: Kaliya bandhigaan waxyaabaha la tirtiro.
Download version Imtixaamana hadda Wondershare Dr.Fone hoose ee lacag la'aanta ah ee:
Qeybta 2: Waraaqda gurmad Lugood si loo badbaadiyo video files ka iMessage on iPhone 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Tallaabada 1. nidaameed aad iPhone la Lugood si ay u sameeyaan gurmad ah
Haddii aad rabto in aad soo saaro gurmad Lugood si uu u badbaadiyo iMessage video files, waxaad u baahan tahay gurmad Lugood ah marka hore. Haddii aanad garanayn haddii aad leedahay, aad ku xidhi kartaa iPhone u Xisaabiyaan oo hagaagsan oo Lugood in ay sameeyaan mid ka mid ah. Waxa si fudud oo aad qaadataa xoogaa daqiiqado ah. Ka dib waxa ay ku dhameysteen, fadlan baxdo Lugood on your computer.
Tallaabada 2. Waraaqda aad gurmad Lugood
Orod barnaamijka on your computer iyo bedesho ikhtiyaarka: kabsado Lugood ee kaabta File. Markaas waxaad heli doontaa suuqa kala ah sida soo socota. Halkan, oo dhan Lugood aad files gurmad waxaa si toos ah helay iyo soo bandhigay. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro oo guji "Start Scan" si ay u soo saaro.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo badbaadin video files ka iMessages
Marka sawirka dhameystiray, waxaad ku eegaan karo iyo hubiyo macluumaadka ee gurmad Lugood hadda. Wixii video files ka iMessage, waxaad dooran kartaa "Lifaaq Message", taas oo kaliya in aad soo bandhigaysaa content warbaahinta ka iMessage ah. Haddii aad rabto in aad si aad u hubiso waxyaabaha uu dhan iMessage, waxaad dooran kartaa "Messages". Markaas calaamadee waxa aad rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer adigoo gujinaya "Ladnaansho".
Kabsado tirtiray fariimaha iPhone : hage Tani waxa ay muujinaysaa sida aad u soo ceshano fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone siyaabo kala duwan. Ladnaansho xiriirada iPhone : Waxaad soo kaban karto xiriir la tirtiro iyada oo aan raad raac ah oo ku saabsan iPhone leh 3 tallaabo istareexsan. Ladnaansho iPhone iMessages : Waxaad soo kaban karto xiriir la tirtiro aan gurmad ah oo ku saabsan iPhone leh 3 tallaabo istareexsan.
Sida loo badbaadi Pictures ka MMS on iPhone in Computer ah
Isbarbar Players Media Best Streaming
FLV Splitter: Sida loo Split FLV Files Fast (Windows 10 ka mid ah)
Top 5 Screen video qabashada u Linux
Video magaabay iyo Joiner: qalab Best si ay u dhinto oo ay ku biiraan qaabab kala duwan
Sida loo wadaag canabka Videos
Sida loo sii qulquli Video Qaabka kasta Google Chromecast
Wax - Sida loo Isticmaalo Free Video Editor Wax si Edit Videos
Sida loo sameeyo a Flash Muqaal Banner